भोलिबाट प्रदर्शन हुने "बाबु कान्छा”लाई युनिर्भसल सर्टिफिकेट, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भोलिबाट प्रदर्शन हुने "बाबु कान्छा”लाई युनिर्भसल सर्टिफिकेट
काठमाडौँ । भोली शुक्रबारबाट नेपाल भर प्रर्दशनमा आउन लागेको सलोन बस्नेत अभिनित चलचित्र “बाबु कान्छा”लाई सेन्सरबोर्डले युनिर्भसल सर्टिफिकेट दिएको छ ।
सेन्सर बोर्डले चलचित्रलाई बालबालिका,युवा युवति तथा सबै उमेर समुहका ब्यक्तिहरुले हेर्न पाउने भएका छन । नेपाली सिनेमा जगतका लागी फरक धारको विषय बस्तुमा आधारित रहेर तयार पारिएको कारणले पनि सबै दर्शकका लागी उत्तिकै महत्वपुर्ण हुने चलचित्रका निर्देशक शोवित बस्नेतले बताए ।
माया प्रेम र रोमान्सका दृश्यहरुलाई निकै कलात्मक रुपमा चलचित्रमा समेटिएको छ । चलचित्रमा सरोज खनाल, नीर शाह, राजाराम पौडेल, सम्राट सापकोटा, लय संग्रौला, मञ्जु पौडेल, सुशान्त श्रेष्ठलगायत कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ । निर्देशक बस्नेतकै लेखन तथा निर्माण रहेको चलचित्रमा गौतमराज खड्काको सम्पादन, अष्ट महर्जनको एक्सन, टंक बुढाथोकी र लक्ष्मण शेषको संगीत, बाबु श्रेष्ठको छायांकन रहेको छ ।